Soomaali ku eedeysan inay taageeren Alshabaab oo codsaday in ay xirtaan Labiska Reer Galbeedka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Bisha soo socta ee May 18-dii ayaa la filayaa inay Maxkamadda Federalka ee Brookleyn ee dalka Maraykanka la soo taago saddex nin oo Soomaali ah, oo lagu eedeeyey inay taageero u fidin jireen Xarakadda Alshabaab.
Saddexdaasi Eedeysane oo lagu kala magacaabo Ali Yasin Ahmed, Mahdi Hashi iyo Mohamed Yusuf ayaa lagu eedeeyey inay Alshabaab u gudbiyeen taageero qalab muddadii u dhexeysay 2008-dii ilaa 2012-kii.
Eedeysanayaasha oo haatan ku xiran Xabsi aad loo ilaaiyo ayaa codsaday in la arad-bixiyo, lana siiyo dhar cusub oo ay xirtaan marka ay hortagi doonaan Maxkamadda.
Garsoorad Heer Degmo oo lagu magacaabo Sandara Townes ayaa ku amartay Hay’addaha Ammaanka in Eedeysanayaashiisa la siiyo min Afar Joog oo Jeenis ah, Labo Jaakad, shan shaarar midab leh, sun maqaar ah, shan joog oo Sigsaan ah, Labo Garawaati ama Taay iyo labo joog oo kabo maqaar ah (Leather shoes).
Eedeysanayaasha Ali Yasin Ahmed oo 30-jir ah iyo Mohamed Yusuf oo 28-jir ayaa la sheegay inay ku dhasheen Somalia, kadibna ay ku noolaayeen dalka Sweden oo ay ka dhoofeen bishii December ee sannadkii 2008-dii, si ay ugu biiraan Xarakadda Alshabaab.
Eedeysanaha kale ee lagu magacaabo Mahdi Hashi I oo 26-jir ah ayaa ku koray dalka Britain, kadibna waxa uu sannadkii 2009-kii ku biiray Xarakadda Alshabaab, isagoo sii maray dalka Imaaraadka Carabta.
Dacwad-oogayaasha Maraykanka waxay sheegeen inay saddexdaasi eedeysane ku biireen Dagaalyahannadda shisheeyaha ee Muhaajiriinta, kuwaasi oo ka barbar dagaalamayey Xarakadda Alshabaab.
Ali Yasin Ahmed iyo Mohamed Yusuf ayaa lagu eedeynayaa inay sannadkii 2008-dii tababar ku soo qaateen Xeradda Buulo Gaduud oo ka mid ah dhowr Xero oo uu dhisay Salah Nabhaan oo Hoggaamiye u ahaa Dagaalyahannadda shisheeyaha ee Xarakadda Alshabaab.
Waxay kaloo Dacwad-oogayaasha Maraykanka sheegeen inay Labadaa Eedeysane lagu eedeynayo inay ku-dhawaad 20 dagaalyahanno shisheeye oo ku sugnaa Gobalka minnesto ee dalka Mraaykanka u direen si ay ugu biiraan Dagaalyahannadda Alshabaab ee xilligaasi ka dagaalamayey magaalladda Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan FBI-da ayaa la sheegay inay Eedeysanayaasha Ali Yasin Ahmed, Mahdi Hashi iyo Mohamed Yusuf gacanta ku dhigeen bishi iAugust ee sannadkii 2012-kii, xilli ay doonayaan inay u safraan dalka Yemen.